Accueil > Gazetin'ny nosy > Fifanarahana miafina ?
Fifanarahana miafina ?
Avo lenta tokoa ve ny politika rehefa ny toeran’ny filohampirenena sy ny praiminisitra no katsahina ? Fa politika iva lenta ve ny fiheverana ny tombontsoam-bahoaka? Izany no miseho hatramin’izay, rah any eto Madagasikara no asian-teny.
Tamin’ny 1958 dia nitady olona hapetraka ho filohampirenena Malagasy raha nosalorana ny sata maha-Repoblika Malagasy azy ny firenena Malagasy. Tsy nahita olona ankoatra ny Padesm ny mpanjana-tany satria tia tanindrazana tsy mitapo-drano ka hahavery ny tombontsoa frantsay avokoa no nandrafitra ny tontolo pôlitika teto. Dia nomena an’i Tsiranana, izay Padesm ny fahefana.
Tamin’ny 1972 dia tsy ny Jeneraly Ramanantsoa mihitsy no tokony ho nitondra ny tany sy ny fanjakana raha niala i Tsiranana, saingy noho izy novolavolain’i Frantsa dia izy no nandray ny fahefana avy amin’i Tsiranana.
Tamin’ny 1975 dia fanonganam-panjakana no nataon-dRatsiraka satria tsy levon’ny vavoniny ny mieritreritra an-dRatsimandrava, ka mody nanda ny fanirian’ny Jeneraly Ramanantsoa azy mba hotendrena lehiben’ny fitondram-panjakana izy. Vao nanendry an-dRatsimandrava anefa ny jeneraly Ramanatsoa dia nibitaka Ratsiraka fa tojo amin’ny niriany izy, satria nataony izay nahafaty an-dRatsimandrava, dia izy iny mora niakatra ho filohan’ny Filankevitra faran-tampon’ny tolom-piavotana iny ny faha-15 jona 1975. Raha ny marina aza, hoy ny akom-baovao dia ny Jeneraly Soja njo tokony ho niakatra teo fa petra-kevitry ny Frantsay no nampiakarana an-dRatsiraka teo.
Tamin’ny 1991 dia ny Jeneraly Rakotoharison Jean no tokony ho filohampirenena avy amin’ny Hery Velona fa kinga ny Frantsay nanolotra ny Pr Zafy dia lasany ny fahefana. Tokony ho ny Pastora Andriamanjato Richard koa ny ho Praiminisitra voalohan’ny Repoblika fahatelo fa mbola tetika maloton’i Frantsa ihany koa no nahalasa Praiminisitra an-dRavony.
Taty amin’ny 2002 dia tao an-tranon’ny Me Jacques Sylla nandritra ny adiny telo, indray hariva ny masoivohon’i Frantsa niasa teto, ka ny ampitso dia izy no notendren-dRavalomanana ho Praiminisitra teny amin’ny Kianjan’ny 13 May ary lasa Praiminisitra raikitra taty aoriana.
Tamin’ny 2002 dia i Monja Roindefo no nironan’ny sain’i Andry Rajoelina ho Praiminisitra, ka iny notendreny teny amin’ny kianjan’ny 13 May iny saingy ny Frantsay no nitady ny irika rehetra nanesorana azy fa tsy maintsy soloina ny olony, dia i Camille Vital, ary avy eo,i Omer Beriziky.
Tsy mifanalavitra amin’izany ny nahalasa Praiminisitra an’i Kolo Roger sy Ravelonarivo Jean ary i Mahafaly Olivier Solonandrasana tamin’izao fitondrana Rajaonarimampianina izao.
Ny atsy aoriana dia efa misy sahady ny fifanarahana miafina any ho any. Raha afaka mirotsaka hofidiana i Marc Ravalomanana dia i Jules Etienne Rolland no ho praiminisitra fa raha tsy afaka hirotsaka Ravalomanana dia ho kandida hotohanany i Jules Etienne. Amin’io faran’ny herinandro io zao dia ho any Manakara Ravalomanana ka i Jules Etienne no re fa hiantoka ny momba azy rehetra any, ary hapetrany ao amin’ny trano valozoron-dRavony i Marc Ravalomanana rehefa any satria moa mpihavana akaiky i Jules Etienne sy Ravony.
Dia manara-maso ny tohiny isika fa misy hatrany ny fifanarahana miafina, toy ny nifanaovan-dry Jules Etienne sy Kolo Roger tamin-dRajaonarimampianina raha vao tsy afaka nirotsaka hofidiana tamin’ny 2013 izy roalahy.